Saraakiil iyo Ciidamo katirsan Shisheeyaha iyo dowladda oo ku waxyeeloobay Dagaal ka dhacay Qoryoolay. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Saraakiil iyo Ciidamo katirsan Shisheeyaha iyo dowladda oo ku waxyeeloobay Dagaal ka dhacay Qoryoolay.
Last updated Feb 17, 2019 218 0
Khasaare culus oo dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhashay weerar ay xalay fiidkii Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ku qaadeen askarta Shisheeyaha ee heysta degmada Qoryooley ee Gobolka Sh/hoose iyo kuwa DF.
Sidoo kale ciidamada dowladda waxaa uga dhaawacmay afar ruux oo u badan maamulka degmada Qoryooley, waxayna kala yihiin Gudoomiyaha degmada, Ku xigeenkiisa, Madaxa Maaliyadda iyo Taliyaha ciidamada ee degmada,
Gudoomiyaha Qoryooley Siciid Cali ayaa la sheegay in dhaawaciisu uu meel dhexaad yahay balse uu daran yahay ku xigeenkiisa oo lagu magacaabo Cabdi Axmad. Sidoo kale Madaxa Maaliyadda degmada, Laqamow iyo Taliyaha ciidanka Cali Waal ayaan iyagana la dhayalsan karin dhaawacyadooda sida ay noo xaqiijiyeen Ilo xog ogaal ah.